Buka Umhlahlandlela Wethu Wokwamukela Ngokushesha »IHodges University
Thenga oKlebe Gear
Thenga i-Amazon Smile
Ukusesha Kwezinhlelo Nezitifiketi
Ukubuka konke kwesitifiketi
Izitifiketi Zokuthweswa Iziqu
Isifundo Sokuphila Konke
Isibalo seNetali yeNet
Uyemukelwa oKlebe Besikhathi Esizayo!
Uyemukelwa kuHodges U! Siyazi ukuthi ukukhetha ukuqhubekisela phambili imfundo yakho kuyisinqumo esijabulisayo, leso esigcwele nemibuzo. Nge-Hodges U, sikusibekele.
Abaxhumanisi bethu abaqeqeshiwe beKholeji bazosiza ekusizeni ukuhambisa isicelo sakho ngenqubo yokwamukelwa. Noma ngabe unentshisekelo ku-Graduate, Undergraduate, ESL, noma izitifiketi, silapha ukukusiza ukuthi uthole okuningi kulwazi lwakho lwasekolishi.
Isinyathelo sokuqala sinzima kakhulu. Qala Uhambo Lwakho Namuhla.
Ukubuka Okusheshayo Kokutholwa Kwethu Inqubo
Qedela Isicelo Sakho.
Khuluma Nomeluleki Wakho Wokwamukela Umuntu.
Thumela Imibhalo Yakho Yokusekela.
Ukwamukelwa, ukuqondiswa, nokubhaliswa. Cishe Usulapho!
Ufuna ukufunda kabanzi ngesinyathelo ngasinye? Ngezansi sizokuhamba kuyo yonke inqubo.
Faka isicelo manje!
Ukusesha Kohlelo Lweziqu
Ukubuka konke kwe-Admissions
Isinyathelo 1 - Thumela Isicelo Sakho
Isinyathelo sokuqala kwinqubo yokwamukelwa ukufaka isicelo sakho. Lokhu kungenziwa online ngokuhambisa ifayili le- uhlelo lokusebenza olusheshayo noma ngokuvakashela ikhampasi yethu eseFort Myers.
Isinyathelo 2 - Xhuma Nge-Advisor Yakho Yomuntu Siqu
Uma ufaka isicelo sakho esisheshayo online, umeluleki wakho we-admissions uqobo uzokuthinta ngocingo, nge-sms, kanye / noma nge-imeyili ukusetha isikhathi sokuxoxa ngekusasa lakho eHodges U. Le ngxoxo ingabanjelwa ocingweni noma kuwe uqobo ikhempasi yethu iFort Myers.
Inhloso yengxoxo yesingeniso ukukusiza ukuthi unqume ukuthi ngabe iHodges University iyona efanelekile yini izidingo zakho zemfundo ephakeme nokwakha ngokubambisana indlela yangokwezifiso yemfundo yakho eHodges University. Uma lesi sinyathelo sesiqediwe, uzothola isimemo kwingosi yethu yomphakathi lapho uzophothula khona isicelo sakho esenziwe ngezifiso, uthumele noma yimiphi imibhalo engadingeka, bese ukhokha imali yakho yokufaka isicelo.
Uma ufaka isicelo sakho mathupha ekhampasi, izinyathelo 1 no-2 zingahlanganiswa.
Isinyathelo 3 - Thumela Imibhalo Yakho
Imibhalo edingekayo ingahluka ngokuya ngohlelo lwakho lwentshisekelo, umlando wezemfundo, indlela yokukhokha, kanye nesimo sobuzwe. Umeluleki wakho we-admissions uzokukhombisa ngemibhalo edingekayo.
Imibhalo edingekayo ingafaka:
Imibhalo Yosizo Lwezezimali
Ungakhathazeki sizobe sikhona ukukusiza ngenqubo yamadokhumenti. Sikwenza kube lula ngangokunokwenzeka!
Isinyathelo 4 nangaphezulu - Ukwamukelwa nokubhaliswa. Cishe Usulapho!
Lapho usuqede inqubo yokufaka isicelo, uzothola isinqumo sakho sokwamukela ezinsukwini ezimbalwa. Sizobe sixhumana nawe ukuqedela ukubhalisa kwakho, futhi uzobhaliswa ngokusemthethweni eHodges U!
Yiba Nesibindi. Faka isicelo Namuhla.
Izinqubo Ezikhethekile Zokubhalisa
Izinhlelo ezithile zidinga izinqubo ezikhethekile zokubhalisa ngaphezu kwezinyathelo ezingenhla zokungeniswa. Sicela ubheke amakhasi angezansi ukuthola imininingwane ethile yohlelo.
BSN - Ubuhlengikazi
Izinqubomgomo nezinqubo zeHodges University maqondana ne- Amalungelo Omfundi Nemithwalo Yemfanelo futhi Isikhalazo sabafundi zishicilelwe kwi-Student Handbook, engatholakala lapha.
Uma kwenzeka ukuthi umfundi abone ukuthi isikhalazo besingaphethwe kahle yisikhungo, umfundi angathumela isikhalazo sakhe kokuxhumana okulandelayo kombuso:
Abafundi Be-Out-of-State Distance Education:
Inqubo yezikhalazo yabafundi abangafundanga amabanga aphuma esifundazweni ababamba iqhaza ngaphansi kweSivumelwano Sokugunyazwa Kokugunyazwa Kombuso (i-SARA), abaphothule inqubo yezikhalazo yangaphakathi yezikhungo kanye nenqubo esebenzayo yezikhalazo zombuso, bangafaka isikhalazo ngezikhalazo ezingezona iziyalezo ku-Florida State Authorization Reciprocity Agreement (FL-SARA) UMkhandlu Wokuxhumanisa Wemfundo Ehamba Phambilini Yokubuyisana (PRDEC) e- FLSARAinfo@fldoe.org.
Ngeminye imininingwane ngenqubo yezikhalazo, sicela uvakashele Inqubo Yezikhalazo ye-FL-SARA Iwebhusayithi.
Qalisa ku- # MyHodgesStory yakho namuhla.
Lewebhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa ulwazi lwakho ngenkathi uhamba ngokusebenzisa iwebhusayithi. Ngaphandle kwala makhukhi, amakhukhi ahlukaniswe ngokudingekayo agcinwa kusiphequluli sakho njengoba ebaluleke kakhulu ekusebenzeni imisebenzi eyisisekelo yewebhusayithi. Siphinde sisebenzise amakhukhi wesithathu asisiza ukuthi sihlaziye futhi siqonde ukuthi usebenzisa kanjani le webhusayithi. Lawa makhukhi azogcinwa kusiphequluli sakho kuphela ngemvume yakho. Futhi unenketho yokuphuma kulawa makhukhi. Kodwa ukuphuma kwamanye amakhukhi kungaba nethonya ekuhlangenwe nakho kwakho kokuphequlula.